Good work...it's not about money, it's about the ethics..which unfortunately isararity in Nepali politics......hopefully, modifying Armstrong's words, this small step might lead to broader ethical leap in Nepali politics.
माओवादीले युद्धकालमा लुटेका र कब्जा गरेका जनताका सम्पती फिर्ता नगरेसम्म म भने यस्ता ४ हजार फिर्ता गर्ने कार्यको प्रशंसा गर्न सक्दिन है !
यो विज्ञापन नै हो, करोड लुटेर हजार फिर्ता हा हा हा ।
म पनि राजन जी को विचारसँग सहमत छु । यो विज्ञापन नै हो , सक्छन् भने जनताको लुटेको घरजग्गा फिर्ता गरेर देखाउन् न ।
म पनि राजन जी को विचारसँग सहमत छु
राम्रो काम गरेको देख्यो कि आँखामा कसिंगर बनिहाल्ने बिचार बोकेको उपज हो । राजनजी को विचार संग सहमत हुन सकिएन किनकी बाबुराम भलै माओवादीका नेता हुन् तैपनी बोलेका कुरा गरेर देखाउने र देखाइदिएका राजनीतिक ब्यक्तित्व हुन् ।
हुन त यो एउटा राजनिती गोटी हो। यो गोटी भने सबैलाइ ज्ञान दिने खालको छ।
तर राजनितीको अर्को पाटोमा कती गुस पैठ भएको छ त्यसको त लेखाजोखा गरेर पनि साध्य छैन। र यसमा कुनै राजनितीक पार्टी कुनै भन्दा कम छैनन।